Safidy manadala - ewa.mg
News - Safidy manadala
Misy ireo manipy fanakianana mavaivay an’ireo izay nanao fanahy iniana tsy nandeha nandatsa-bato, afak’omaly. Toa mbola diso ihany koa, raha ny filazan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), ireo mpifidy afaka nanatanteraka ny adidiny tamin’ny fifidianana filoham-pirenena saingy voasakan’ny lesoka samihafa. Homen-tsiny kosa ve ireo nahavita ny adidiny saingy azo inoana sahady fa hitora-bato an’ireo solombavambahoaka hahazo seza, eny Tsimbazaza, atsy ho atsy.
Samy manana ny famaritany ny atao hoe lafatra ny tsirairay sady malalaka ny fanehoan-kevitra raha hanombana ny kalitaon’iny fifidianana solombavambahoaka iny. Miteny ho azy, na tiana na tsy tiana, ny tahan’ny fahavitrihan’ny mpifidy. Azo afangaro ao daholo ny fahalainan’ny olom-pirenena sy ny tsy fahatomombanana isan-karazany hatramin’ny hafokan’ireo kandidà, miampy ny goragora amin’ny fampanarahan-dalàna eto amin’ity firenena ity. Hatreto aloha dia mendrika an’izay solombavambahoaka iraika amby dimampolo amby zato miandahy miambavy eny amin’ny Antenimierampirenena isika. Tsy maintsy mbola ho adin’ny mpiaro fahefana an-jambany sy ny bontolon’ny mpanozongozona fitondrana indray no hanjaka.
Aza afatratra any amin’ny tsy fitiavan’ny olom-pirenena maro ny resaka politika intsony ny rihitra fa efa porofo diso mitohoka amin’ny tenda loatra ny zava-nisy tamin’ireo fifidianana intelo miantoana, dia ny fihodinana indroa tamin’ny fifidianana filoham-pirenena sy ity fifidianana solombavambahoaka ity. Vitsy loatra ny kandidà mendrika hofantenan’ny vahoaka. Ireo tsimatimanota hatrany anefa no mibahana ny kianja satria marefo ny lalàna tokony hanenjika azy ireo. Tsy tsapatsapa vodin’akoho akory no miandry amin’ny fifidianana fa toy ny terena hitsoboka any anaty lava-piringa ny olona: maloto avokoa no tazan’ny maso. Hazoto amin’ny lafiny rehetra izy rehefa iainantsika eto amin’ny firenena ny fahadiovana miainga any ambony hatrety ambany. Mandra-piandry izany aloha, hafana indray ny fifampitorohana sy fifampitoriana etsy sy eroa amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao. Toy ny mahazatra hatramin’izay, saingy miha mamohehatra!
L’article Safidy manadala est apparu en premier sur AoRaha.
Nivoaka tamin'ny : 29/05/2019
Hetsika roa samy hafa: tatitry ny depiote eny Tanjombato – “Antsam-piderana” etsy Mahamasina
Hangorompotsy ny etsy Mahamasina raha hidorehitra mena ny eny Tanjombato. Neken’ny prefektiora, saingy nametrahana fepetra ny tatitra hataon’ny depiote Tim, etsy amin’ny Magro Tanjombato, anio. Hentitra ny prefet de police, ny Jly Ravelonarivo Angelo, tetsy Tsimbazaza nanoloana ny mpanao gazety, ny amin’ny tsy tokony hanaovana lahateny fihantsiana na fankahalana fa tena haneho sy hitatitra ny fivorian’ny Antenimierampirenena farany teo amin’ny vahoaka. Anio ihany koa anefa izany tatitra izany fa tsy ho isaky ny asabotsy, araka ny nambarany.Hanao be fiavy ireo hery politika hafaNa izany aza, handray ny fepetra rehetra ho amin’ny mety ho fihoaram-pefy sy ny fanakorontanana manerana ny tanàna ny eo anivon’ny Emmo/Reg. Efa mivonona sy hiatrana amin’ny toerana saropady ny mpitandro filaminana, anio. Halalaka kosa ny fivezivezena sy ny fifamoivoizana, araka ny nambaran’ny eo anivon’ny OMC hatrany. “Raikitra fa eo amin’ny Magro Tanjombato isika. Neken’ny OMC sy ny prefet ny fangatahana ny toerana natolotsika. Malalaka sy antonona antsika io toerana io. Tongava maro fa vonona isika hifanotrona sy hampiseho fa miara-manonja”, hoy ny depiote Razafimanantsoa Hanitra. Nanoina ny antson’ireo depiote enina mianadahy ary nanentana ireo mpikambana ao aminy koa ho avy eny an-toerana ny avy amin’ny RMDM sy ny “Groupe Panorama” ary ny eo anivon’ny HVM.Reseo amin’ny soa ny ratsy…Etsy andaniny, hitondra am-bavaka ny firenena amin’ny alalan’ny “Antsam-piderana” ireo mpanakanto ara-pilazantsara maherin’ny 20, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Lohahevitra amin’izany ny voalazan’ny Soratra masina : “Aza mety ho resin’ny ratsy fa reseo amin’ny soa ny ratsy”. Anisan’ny mikarakara izany ny eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika manoloana ny tranga niseho nolalovan’ny firenena vokatry ny Covid-19. Eo koa ireo savorovoro amin’izao fotoana izao. “Tanjona ny hametrahana fitoniana ho an’ny tsirairay amin’ny alalan’ny vavaka”, hoy ny mpikarakara. Nomena toromarika hiakanjo fotsy ireo hanatrika izany seho izany, hanehoana ny fahadiovana sy ny firaisankina ary ny fihavanana izany.Hanara-maso sy hiatrana eny rehetra eny, manoloana ireo hetsika roa samy hafa, ireo ny mpitandro filaminana.RandriaL’article Hetsika roa samy hafa: tatitry ny depiote eny Tanjombato – “Antsam-piderana” etsy Mahamasina a été récupéré chez Newsmada.
Fifidianana loholona :: Haverina ny fandrafetana ny lisitra volomboasary
Hiova indray ny lisitr’ireo kandida hitondra ny loko volomboarasy amin’ny fifidianana loholona, amin’ny 11 desambra 2020. Tontosa, tamin’ny herinandro lasa iny, ny fifantenana voalohany niaraka tamin’ny fandrafetana ny lisitr’ireo kandida saika haroson’ny antoko politika Tanora malaGasy Vonona (TGV) amin’io fifidianana, saingy izao haverina hokitihina izao. “Mamerina ny antso ho an’ireo olona manana ny fahaiza-manao afaka hisolo tena ny antoko amin’io fifidianana io izahay. Nojerena avokoa ny mombamomba an’ireo kandida namaly ny antso, ka nisy ary mety mbola hisy ny fanitsiana ny lisitra”, hoy ny depiote Lanto Rakotomanga, mpikambana eo anivon’ny birao politikan’ny antoko TGV, tamin’ny antso an-tariby, omaly. Nomarihiny ihany koa fa tsy voatery ho mpikambana ao anatin’ny antoko TGV no hosafidiana hiatrika ny fifidianana loholona. Fantatra fa tsy maintsy vita, amin’ity herinandro ity, ny fandrafetana an’io lisitra vaovao io. L’article Fifidianana loholona :: Haverina ny fandrafetana ny lisitra volomboasary est apparu en premier sur AoRaha.
Elaela tsy hita: hiverina an-tsehatra Ralanto
Miavaka ny mozikany… Gadona gasigasy no ilazan’ny mpanatsotra resaka azy. Gadona Ralanto kosa raha izy no hanontaniana. Satria nandalo lalana maro Ralanto teo amin’ny tontolon’ny mozika, ary nitrandraka sy nandova mozika maro ihany koa. Elaela no tsy hita an-tsehatra ity mpanakanto ity, noho ny antony maro. Fantatra kosa izao fa hiverina hizara ny kantony izay tsy najanony mihitsy Ralanto. Fotoana voalohany sy akaiky indrindra ny rahampitso alakamisy 18 febroary, etsy amin’ny No Comment Bar Isoraka. Fotoana hizaran-dRalanto indray ireo hira efa andrasan’ny mpankafy, sady nanamarika ny nanombohany mozika tany amin’ny taona 80 ka hatramin’izao io. Izay karazana jery todika ny lalana nizorana izay hatrany rahateo no andrasan’ny mpankafy amin’ity mpanakanto ity. Misy hatrany ireo liana te haheno ny hirany tany amin’ny tarika Herlesn nanombohany, ny folksong, indrindra ireo nahafantarana an-dRalanto fony izy tao amin’ny Kangasy. Tsy hatreo ihany anefa, fa manana hira vaovao hozaraina, ankoatra ireo efa taloha fa tsy mbola fahenon’ny mpankafy ity mpanakanto ity.Zo ny AinaL’article Elaela tsy hita: hiverina an-tsehatra Ralanto a été récupéré chez Newsmada.
Sehatra bagasy: hanazava ny feo faharoa i Lidy
Ankoatra ny maha mpitsabo azy, mpihira anisan’ny tsy zovina amin’ny mpitia zavakanto, indrindra fa ny kalon’ny fahiny sy ny hiran’ny omaly, i Lidy ao amin’ny tarika R’Imbosa. Hizara izay traikefa matanjaka ananany izy, rahampitso, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro, ao amin’ny IKM Antsahavola. Amin’ny ankapobeny, hizara telo ny fandaharam-potoana amin’io. Ny tantarany sy ny fivoaran’ny feo faharoa bagasy. Ny fomba fihira feo faharoa manaraka ny ngadona sy kolontsaina malagasy. Ny tombontsoan’ny fisian’ny hira marobe an-kapila voaangona sy ny fahafantarana ireo andrarezin’ny feo faharoa, tao anatiny sy ivelan’ny teatra malagasy.Raha ny fikarohana nataon’ity andrarezin’ny feo faharoa ity, roa ny anjara toerana lehibe tazonin’ny feo faharoa. Izy no manaraka ny feo voalohany amin’ny filantoan’ny hira. Manaingo ny hira ihany koa ny feo faharoa na ny « feon’ny fihetseham-po ». Anjara fahatelo raisiny ny hamoahan’ny mpihira ny angolan-kira izay miseho amin’ny endrika maromaro tsy voatery ho voasoratra anaty solfa.HaRy Razafindrakoto L’article Sehatra bagasy: hanazava ny feo faharoa i Lidy a été récupéré chez Newsmada.
Fambolem-bary : harenina ny vahilava manerana ny sompitr’i Madagasikara
Mihena ny voka-bary re­hefa tsy voakojakoja ny tohodrano, ny vahilava, ny lakan-drano manondraka ny tanimbary. Maro amin’izy ireny no efa simba ampolo taona maro, toy ny any Alaotra, sompitr’i Madagasikara voalohany sy ny any Marovoay, sompitra faharoa, ohatra. Nanapa-kevitra ny fanjakana fa harenina ny vahilava amin’izy ireny. Nomena an­draikitra ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana ary ny jono (Maep) amin’ny fa­maritana sy mijery ny fandaniam-bola ary ny fanatanterahana ny asa. Notsindriana manokana kosa anefa fa tsy maintsy mialoha ny fiavian’ny orana no hanaovana izany. Hatreto, tsy mbola nisy ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Maep, efa nilatsaka anefa ny rotsak’orana voalohany. Amin’ny ankapobeny, ny fiandohan’ny volana desambra ny tena fiavian’ny orana sy fotoam-pahavaratra.30.000 ha tsy afaka ambolena ny any AlaotraManomboka ny volana janoary kosa ny tena fanombohan’ny fikarakarana ny ta­nimbary, hiatrahena ny fo­toam-pambolena. Anisan’ny tena tsy ampy rano ny any Alaotra efa an-taona maro, ny any amin’ny faritra PC 15, ny PC 23 any amin’ny tapany atsimon’ny Farihy (kaominina Morarano) ary ny any amin’ny PC avaratra. Mitotaly 30.000 ha ireo velarana ireo. Maro ny tetikasa fanajariana ny lemaka any an-toerana, saingy tsy tena voavaha ny olana. Saika tsy nisy fikojakojana mihitsy kosa ny any amin’ny lemak’i Marovoay, tato anatin’ny 40 taona. Koa, andrasana ny asa mivaingana hataon’ny Maep amin’ity toromariky ny fanjakana foibe ity, hanarenana ireo vahilava rehetra any amin’ny sompitr’i Madagasi­kara. Ankoatra ny any Alaotra sy Marovoay, sompitra mpamokatra vary koa ny any Andapa, Bealalana, Moron­dava, sns.Njaka A.L’article Fambolem-bary : harenina ny vahilava manerana ny sompitr’i Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.
“Festival The Week End”: telo andro anatin’ny mozika sy ny fialamboly
Raha ny fanamby, tsy mbola nisy ny hetsika toy ity miandry ity. Hilomano anatin’ny mozika, ny zavakanto ary ny karazam-pialamboly maroloko ireo hanatrika ny “Festival The Week End”, mandritra ny hateloana.Hetsika goavana, andrasan’ny maro, indrindra amin’ity faran’ny herinandro ity, ilay “Festival The Week End”. Telo andro an-danonana, anatin’ny mozika, ny zavakanto sy ny fialamboly maroloko ny kasain’ny Ivenco hotontosaina, ny 2, ny 3 ary ny 4 aogositra ho avy izao, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. “Amin’ny maha orinasa misehatra eo amin’ny famokarana kanto, mirona mankany amin’ny fitondrana zava-baovao ho an’ny Malagasy ny Ivenco. Fanamby goavana be ity hetsika ity”, hoy ny fanazavana nomen’ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny Ivenco. Goavana satria Sehatra telo lehibe hatokana ho an’ny mozika fotsiny no miandry amin’io. Maherin’ny 50 kosa ireo karazana fialamboly hatolotra, homanin’ny mpikarakara miisa 200 mahery. Manantena mpijery hatrany amin’ny 20 000 kosa izy ireo. Mpanakanto manana ny lazany avokoa ireo hifandimby an-tsehatra mandritra ireo telo andro ireo: Shyn, Denise, Mage 4, Kiaka, Zay, Dalvis, Da Hopp, 18.3, Raboussa, Tovo J’Hay, Nate Tex, sns. Hisy sehatra manokana ihany koa ho an’ireo mpanakanto vao misondrotra amin’io fotoana io. Hanao fampisehoana miavaka koa ireo mpiangaly ny “laser”, hiara-dalana amin’ny fahaiza-manaon’ireo mpikosika kapila toa an-dry Dj Shin Chan, MPX, sns. Lafiny fialamboly, misy ny toerana ho an’ireo mankafy ny “jeux vidéos”, ny “sports extrêmes”, sy izay mety ho karazan-dalao fahita amin’ireny kerimesy lehibe ireny. Zo ny Aina L’article “Festival The Week End”: telo andro anatin’ny mozika sy ny fialamboly a été récupéré chez Newsmada.
Fampianarana mozika: hanana « Conservatoire » i Madagasikara
Sambany eo amin’ny tantaran’ny fampianarana mozika eto Madagasikara ! Hotokanana amin’ny fomba ofisialy androany maraina ny « Conservatoire National de Madagascar » na ny CNM. Ny Foibem-pirenena fampianarana mozika (Cnem) teo aloha ity navadika ho « Conservatoire » ity. Ny foto-drafitrasa nampiasain’ny Cnem, etsy Ampefiloha, rahateo aloha, hatreto, no misy ny foiben’ny CNM. Tsiahivina fa efa namoaka mpianatra maro ny Cnem. Maro rahateo ny zavamaneno ianarana ao aminy. Anisan’ireny ny gitara, ny piano, ny valiha, ny violon, ny flûte, sns. Niampy fianarana dihy ireo ka nanjary « Cnemd » no niantsoana azy mialoha izao ivadihany ho « Conservatoire National de Madagascar » izao. Ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny fiarovana ny vakoka sry ny fampiroboroboana ny asa tanana kosa no miahy ny CNM. HaRy Razafindrakoto
Fifidianana ho filohan’ny federasiona: mety hisy kandidà hosazin’ny Fifa
Anisan’ny fifidianana arahin’ny rehetra maso, tsy ny eto Madagasikara ihany fa na hatrany ivelany, ny an’ny baolina kitra (FMF). Andrasan’ny besinimaro ny ho isan’ny kandidà tena voatazona hiatrika izany.Ho fantatra, rahampitso alakamisy 1 aogositra, ny lisitra ofisialin’ireo kandidà hifaninana ho filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Hamoaka sy hampahafantatra izany ny “Comité de normalisation”. Raha tsiahivina, dimy mirahalahy mianaka ireo kandidà nahafeno ny fepetra: Andriamiasasoa Doda, Rasoamaromaka Hery, Rabekoto Raoul Romain, Rakotomamonjy Neypatraiky ary i Mohamad Abdillah.Araka ny tsilin-tsofina anefa, mety hisy kandidà roa hosazin’ny Federasiona iraisam-pirenena (Fifa). Noho ny resaka politika ny iray, voalaza fa tsy azo afangaro amin’ny fitantanana ny baolina kitra ary ady heloka tsotra ny an’ny iray.Etsy ankilany, heno ihany koa fa toa nisy kandidà niala an-daharana fa tsy vonona tamin’ny ora farany. Ny fanambarana ataon’ny “Comité de normalisation” no hanamarina izany rehetra izany fa hatreto aloha, ho mpifaninana izy dimy ireo.Raha tsiahivina, hotanterahina any Ifaty Toliara, ny asabotsy 24 aogositra ho avy izao, ny fifidianana ho filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra. Hiara-dalana amin’izany koa ny an’ireo ho komity mpitantana.Aorian’ny famoahan’ny “Comité de normalisation” ny kandidà ofisialy, hotontosaina ny zoma 2 aogositra ny antsapaka, amin’ny filaharana ao amin’ny biletà tokana sy ny ho fandraisam-pitenenana, ao amin’ny onjampeo sy ny fahitalavi-pirenena, hanehoan’izy ireo ny fandaharanasany.Tsiahivina fa manan-jo feno handatsa-bato, amin’io fifidianana, hatao any Toliara, io, ireo filohan’ny ligim-paritra 22, manerana ny Nosy. TompondakaL’article Fifidianana ho filohan’ny federasiona: mety hisy kandidà hosazin’ny Fifa a été récupéré chez Newsmada.
Fifidianana ny FMF: Hanatrika i Fatma Samoura Anisan’ireo olona manankaja hanatrika ny fizotran’ny fifidianana ho filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF), any Ifaty, Toliara, ny sekretera jeneralin’ny federasiona iraisam-pirenena, ramatoa Fatma Samoura. Raha tsiahivina, hotanterahina ny asabotsy 24 aogositra ho avy izao izany ary miisa dimy mirahalahy ireo hifaninana: Rabekoto Raoul, i Mohamad Abdillah, Andriamiasasoa Doda, Rasoamaromaka Hery ary Rakotomamonjy Neypatraiky. Fosa Junior Boeny: Mpilalao 20 ny ho atsy MaorisyHanainga, amin’ity alakamisy ity, ho atsy Maorisy, ny Fosa Jr Boeny. Hanatrika ny lalao miverina eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, hikatrohana amin’ny Pamplemousses SC. Mpilalao 20 mirahalahy ny hanatrika izany fihaonana izany. Tsiahivina fa efa nanantombo tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0, ny Fosa Jr, nandritra ny lalao mandroso, natao tany Mahajanga, tapa-bolana lasa izay. Nangonin’i Tompondaka L’article Vaovaon’ny kitra a été récupéré chez Newsmada.
Mpiasan’ny Spat: fitsidihana ny foibe Pact
Nisantatra voalohany, nitsidika ny Ivontoerana fiofanana sy fianarana teny vahiny (Pact), ny mpiasan’ny seranan-tsambon’i Toamasina (Spat), ny 10 desambra teo. Fitsidihana tampoka, notarihin’ny tale jeneraly, Christian Avellin Eddy. Nambarany fa tombony ho an’ny Spat ny fisian’ny Pact, satria nalefa niofana tany ivelan’ny orinasa ny mpiasa tany aloha ka mampitombo ny fandaniana.Hita ao amin’ity foibe Pact ity ny internet, lakozia, fatoriana, efitrano fanaovana lanonana, sns.Nampahatsiahiviny fa efa tonga tsikelikely ireo teknisianina japoney, misahana ny fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina, ataon’ny Jica. Tsy miova ny fe-potoana hahavitan’ny asa amin’ny taona 2025, na teo aza ny fihibohana vokatry ny Covid- 19.SajoL’article Mpiasan’ny Spat: fitsidihana ny foibe Pact a été récupéré chez Newsmada.
334.000.000 Ar ny tentim-bidin’ny fanamboarana sy fanitarana ny sampan-draharaha mandray an-tanana ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza ao amin’ny CHU Place kabary Antsiranana. Fiaraha-miasan’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ny masoivohon’i Japon no hahafahana manatanteraka izany. Tanjona ny hampavitrika ireo reny mikarakara tena any amin’ny hopitaly, toy ireo mitondra vohoka sy manao fandrindram-piterahana ary mitondra ny zanany hotsaboina sy hatao vaksiny eny amin’ny tobim-pahasalamana. Tafiditra hatrany ao anatin’ny fanatrarana ny velirano fahadimy momba ny fahasalamana ho an’ny rehetra tsy anavahana sokajin-taona ny asa fanitarana sy fanatsarana.Nankatoavina nandritra ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia teo, ny hanaovana tolo-bidy hanamboarana ny “pipeline” na fantsona lehibe mitondra rano miainga ao amin’ny reniranon’i Efaho mankany amin’ny faritra Androy. Mirefy 69km ny halavan’ny fantsona hitarihana ny rano hamatsy ny tanànan’Androy manontolo. Heverina hivoaka amin’ny 13 oktobra izao ny “appel d’offre” . Hosafidina aorian’izay ny orinasa hanatanteraka ny asa sy izay tena mahavita azy tsara. Haharitra 12 volana na herintaona ny asa ka hahazo rano amin’izay ny ao Androy. Hanondraka velaran-tany mirefy 2.000 ha sy hamatsy rano amin’ireo tanàna 60 mahery ao Androy ny rano miainga any Efaho.Hisy koa ny toerana manokana hahafahan’ny biby fiompy madinika misotro rano amin’ity dingana voalohany ity.L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
Nécrologie du 12 octobre 2021
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 12 octobre 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Basikety N1A 2021: misalotra ny anaram-boninahitra ny Mb2All Analamanga sy ny Cospn Analamanga
Nifarana, omaly, teny amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara, N1A lahy sy vavy, taona 2021. Voahosotra ho tompondaka ny ekipan’ny Mb2All Analamanga sy ny Cospn Analamanga.Nanao pao-droa ny ekipa an’Analamanga, tamin’ity fifaninanam-pirenena N1A 2021 ity. Nafana sy nampitsanga-nitoetra ny mpijery ny lalao famaranana, na teo amin’ny sokajy lehilahy izany na ny sokajy vehivavy. Niakatra ny lentan’ny mpilalao tamin’ity, hany ka niady ny fifandonana. Teo amin’ny vehivavy, fitaintainana hatramin’ny farany ny niandrasana izay hibata ny amboara. Na dia somary nangatsiatsiaka aza ny ekipan’ny SBBC Boeny tany am-panombohana, nanezaka mafy izy ireo ka nitsimbadika ny isa teny amin’ny solaitrabe. Tsy nahasakana ny ekipan’ny Mb2All anefa izany ka azony ny amboara, tamin’ny isa 71 no ho 69, sengondra vitsy tsy hifaranan’ny lalaon’ny roa tonta. Tsiahivina, intelo nisesy izao ny nisaloran-dry Malala sy ry Rasoa ary ry Murielle ny anaram-boninahitra ho tompondaka an’i Madagasikara. Laharana faharoa toy ny tamin’ny taon-dasa hatrany kosa ny ekipan-dry Maeva, Coralie, Dalya ary Sarobidy.Nangotraka ihany koa ny teo amin’ny sokajy lehilahy Toraka izany koa ny teo amin’ny sokajy lehilahy, nangotraka ny fihaonan’ny Cospn Analamanga sy ny Sebam Boeny, nandritra ny lalao, omaly. Ekipan’ny samy henjana ka samy tsy nisy nanaiky lembenana. Nifandimbiasana ny fampitomboana ny isa teny amin’ny solaitrabe. Nisy fotoana efa nifanakaiky be 22 no ho 23 ny isa, nandritra fizaram-potoana faharoa. Nitohy tamin’ny fizaram-potoana fahatelo sy farany izany, somary nihalefy kely anefa ny herin-dry Faralahy sy ry Martial ka nobatain’ny ekipan’i Livio sy ry Kakay mora foana, tamin’ny isa 57 no ho 50 ny fandresena. Indroa izao ny nisaloran’ny Cospn izao tompondaka nasionaly ny N1A, sokajy lehilahy izao.Lavo tamin’ny manasa-dalana ny andrarezinaTsy nampoizin’ny maro ny valin-dalao teo amin’ny manasa-dalana, teo amin’ny sokajy lehilahy. Nolavoin’ny Sebam tamin’ny isa hety dia hety …. ny andrarezina, ny GNBC. Tafapetraka teo amin’ny laharana fahatelo kosa anefa ity ekipan’ny Zandary ity, rehefa nandavo ny Cosfa tamin’ny isa 68 no ho 60. Laharana fahadimy ny Mb2All, faha-6 ny Ascut, faha-7 ny Cospn 2 ary faha-8 kosa ny As Fanalamanga. Teo amin’ny vehivavy, laharana fahatelo ny Cospn2 Atsinanana rehefa nanilika ny Ankaratra, tamin’ny isa 66 no ho 65. Laharana fahadimy ny Jea Vakinankaratra, faha-6 ny Serasera Vakinankaratra, faha-7 ny Tamifa Amoron’i Mania ary faha-8 kosa ny Ascut Atsinanana.Mi.RazVehivavyMM: Ramino Nivo Irma N°7 – COSPN2 (192)MVP: Ranarisaona Elinah Chantiah N°23 -MB2ALLEkipa Fair play: Serasera VakinankaratraLehilahyMM: Tsialefitra Jino N°14 – COSPN2 (252)MVP: Ratianarivo Livio N°06 -CospnEkipa Fair Play: Ajrt Androy L’article Basikety N1A 2021: misalotra ny anaram-boninahitra ny Mb2All Analamanga sy ny Cospn Analamanga a été récupéré chez Newsmada.
Région Vakinankaratra : L’employabilité soutenue par le MATSF
Les élèves méritants des écoles publiques de la commune d’Antohobe, en visite au MATSF à Anosy « Je vous conseille vivement de bien choisir, dès l’école secondaire, le métier que vous voulez exercer à l’avenir ». C’est le discours que le ministre de l’Aménagement du territoire et des services fonciers, Hajo Andrianainarivelo, a tenu, lors de sa rencontre avec les élèves méritants aux examens CEPE et BEPC, de la commune rurale d’Antohobe, district de Betafo, dans la région Vakinankaratra. C’était le samedi 9 octobre dernier. En effet, pour récompenser leurs efforts et performances, les élèves méritants des écoles publiques de la commune d’Antohobe ont été invités par le maire à visiter la capitale de Madagascar. La visite du MATSF (ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers) figurait au programme de ce déplacement. Le ministre Hajo Andrianainarivelo en personne a reçu ces élèves ainsi que leurs parents et leurs enseignants conduits par le maire de la Commune et ses proches collaborateurs. Pour les élèves, c’était une occasion de découvrir ce qu’est l’Administration publique centrale, les attributions du MATSF, les responsabilités des directeurs généraux, directeurs et autres responsables au sein de ce département. Antsa R. L’article Région Vakinankaratra : L’employabilité soutenue par le MATSF a été récupéré chez Midi Madagasikara.
STAR : 217 collaborateurs récompensés pour leur fidélité
Les collaborateurs de STAR, décorés lors d’une cérémonie organisée hier au Carlton Anosy. Un poids lourd de l’industrie nationale. C’est ainsi que la STAR est décrite par son DG Marc Pozmentier, lors de la cérémonie de remise de médaille de travail et distinctions honorifiques aux collaborateurs de la société. En effet, la STAR affiche plus de 2.550 emplois directs, 5 usines et 15 agences commerciales à travers le pays. « Nous sommes d’ailleurs très fiers de voir apposer sur l’ensemble de notre production le label Malagasy Ny Antsika que nous a attribué le SIM (Syndicat des industries de Madagascar). C’est une reconnaissance de notre implication permanente dans la promotion et la défense du Vita Malagasy cher à chacun d’entre nous. Seul, nous ne sommes rien, ensemble nous pourrons déplacer les montagnes et surtout viser les étoiles », a-t-il déclaré. À noter que la société a récompensé 217 employés pour leur fidélité, lors de cérémonies organisées dans plusieurs villes. La dernière s’est tenue hier, au Carlton Anosy, pour 63 récipiendaires. Parmi les employés décorés, 154 récipiendaires ont obtenu une médaille de travail, 58 ont reçu le grade de « Chevalier de l’ordre national », et 5 ont reçu le grade de « Officier de l’ordre national ». Par ailleurs, pour marquer l’existence d’un réel partenariat public-privé, les dirigeants de STAR ont invité les autorités locales à chaque cérémonie. Antsa R.L’article STAR : 217 collaborateurs récompensés pour leur fidélité a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nécrologie du 14 octobre 2021
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 14 octobre 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Morarano Ambatolampy: naiditra am-ponja ny sefo fokontany
Taorian’ny fampanoavana tao Antsirabe, ny alakamisy teo, naiditra am-ponja vonjimaika ny sefo fokontany ao Belambo sy ny ramatoa iray lehiben’ny boriborintany Morarano (chef d’arrondissement administratif) miampy lehilahy roa mpivarotra omby. Izy ireo, izay voarohirohy tamin’ny fampiasana taratasin’omby hosoka. Araka ny filazan’ny zandarimaria, nisy ny fahitana omby niaraka tamina taratasy hosoka nandritra ny fanaraha-maso nataon’izy ireo tao amin’ny tsenan’omby Ambodivato Andramasina Ambatolampy. Nisokatra tamin’izay ny famotorana. Voalaza fa nisy roa lahy nilaza ho tompon’omby nilaza fa tsy fanta-piaviana ireo omby novidina ary tsy nanana taratasy ihany koa ka nitadiavana taratasy hanadiovana azy. Araka izany, nisanda 60.000Ar ny iray tamin’ireo taratasy ary azo tany amin’ny sefo fokontan’i Belambo izany. Ity farany indray no namboraka fa “Fiche individuelle de Bovin” na FIB hosoka azo avy amin-dRamatoa lehiben’ny boriborintany Morarano ireo azo. Fantatra tamin’ny fanadihadian’ny zandary fa fanaon’ireto olom-boafidy ireo ity asa ratsy ity. Manaporofo izany ireo FIB hosoka 55 isa hita tao an-tranony tamin’ny fisavana natao. Henintsoa HaniL’article Morarano Ambatolampy: naiditra am-ponja ny sefo fokontany a été récupéré chez Newsmada.